Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato horumarka joogtada ah (laga bilaabo 0 illaa 100) | Cusbooneysiinta Cagaaran
Horumar waara waa fikrad hubaal ah inaan dhamaanteen ka wada maqalnay. Sida lagu qeexay, waxay umuuqataa inay tahay horumar dadka ku wajahan mustaqbal taas noqon kara mid is-ilaaliya waqtiga. Si kastaba ha noqotee, sida had iyo jeer dhacda kiisaska qof walba uu adeegsado ereyga, isticmaalkiisa sii xumaaday wuxuu u horseedaa xadgudub illaa heer uu qalloocinayo macnaha asalka iyo aasaasiga ah.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa uu yahay horumar waara iyo wax kasta oo la xiriira?
1 Asalka horumarka waara
2 Astaamaha horumarka waara
3 Horumar dhaqaale iyo bulsho oo ixtiraamta deegaanka
4 Arimaha deegaanka oo looga hadlay horumar waara
5 Noocyada waara
5.1 Dhaqaalaynta dhaqaalaha
5.2 Waaritaanka bulshada
5.3 Joogtaynta deegaanka
Asalka horumarka waara
Laga bilaabo 1970-yadii, saynisyahannadu waxay bilaabeen inay gartaan in ficilladooda badan ay soo saareen a saameynta ugu yar ee dabeecaddaSidaa darteed, khubarada qaar waxay tilmaameen luminta muuqata ee kala duwanaanshaha kala duwanaanshaha aragtiyaha si loo sharaxo u nuglaanta nidaamyada dabiiciga ah.
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee xilligeenna waa kala-dhanbaynta oo ah qaabka guud iyo aayaha aadanaha oo dhan. Taasi waa in la yiraahdo, waxaan ka nimid hal dal ama mid kale, dhamaanteen waxaan ka tirsanahay hal meere, oo leh kheyraad dabiici ah oo xadidan, iyo meel kooban oo ay tahay inaan wadaagno.
Thanks to warbaahinta iyo teknolojiyadda, dhammaanteen si fiican ayaa loogu wargalin karaa waxa ka dhacaya meel kasta oo adduunka ah. Intaas waxaa sii dheer, horumarinta warshadaha iyo helitaanka shidaalka shidaalka ayaa noo oggolaaday, 260 sano oo keliya, inaan ku horumarno heerar aad u sarreeya.
Sannadkii 1987-kii ayaa la soo saaray warbixinta Brundtland (asal ahaan waxaa loogu magac daray "Mustaqbalkeena Wadajira") ee UN World Commission for Degaanka iyo Horumarinta, oo qeexaysa horumar waara sida horumarkaas oo raadinaya in la daboolo baahiyaha jiilalka hadda jira iyada oo aan wax u dhimeynin fursadaha jiilalka mustaqbalka ee kaqeybgalka iyaga u gaar ah baahiyo.
Ujeedada warbixintan ayaa ahayd in la helo habab wax ku ool ah oo looga hortago dhibaatooyinka adduunka ka jira ee horumarka iyo bay'ada ah si taas loo gaadhona waxay saddex sano ku maqnaayeen dhageysiyada dadweynaha oo ay heleen in kabadan 500 oo faallooyin qoran ah, oo ay falanqeeyeen aqoonyahanno iyo siyaasiyiin ka kala yimid 21 dal iyo fikrado kala duwan.
Astaamaha horumarka waara
Horumar waara wuxuu ka shaqeeyaa raadinta isku dheelitirnaanta saddexda tiir aasaasiga ah: deegaanka, dhaqaalaha iyo bulshada. Horumarka waara waqtiga kadib waa inuu lahaadaa isku dheelitirnaan u dhaxeysa ilaalinta deegaanka iyo noolaha, waa inuu gacan ka geystaa hagaajinta dhaqaalaha wadamada isla mar ahaantaana, gacan ka geystaa horumarinta bulshada casriga ah, iyada oo aan dhibaatooyinka sida sinaan la'aanta, cunsuriyada, xadgudubka jinsiga, iwm.
Si dal u u helo horumar xasiloon iyo bulsho horumar iyo barwaaqo leh, waxaa lagama maarmaan ah in baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada sida cuntada, dharka, guryaha iyo shaqada la daboolo, tan iyo haddii saboolnimada bulshada ay sii fideyso ama ay tahay wax caadi ah, labada aag ee kale ficil lama horumarin karo.
Maaddaama horumarka iyo samaqabka bulshada ay ku xaddidan yihiin heerka teknolojiyadda, ilaha deegaanka, iyo awoodda bey'adda ee la qabsan karta saameynta waxqabadka aadanaha, waa inaan ku dhaqano hadba wixii aan helno iyo ha daalin ilaha. Kobcin aan xadidnayn waa wax aan macquul ahayn, maadaama dhulkeenu kooban yahay.
Xaaladdaan oo la soo gudboonaatay, suurtagalnimada hagaajinta tiknoolajiyada iyo abaabulka bulshada ayaa la soo qaaday, si bay'adu uga soo kaban karto isla heerka ay saameysay waxqabadka aadanaha, si looga fogaado kheyraad yaraan.
Horumar dhaqaale iyo bulsho oo ixtiraamta deegaanka
Maaddaama ay tahay in horumarinteennu ku xirnaato horumarinta saddexda tiir ee aasaasiga ah (dhaqaalaha, bey'ada iyo bulshada), ujeeddada laga leeyahay horumarka waara waa si loo qeexo mashaariicda ugu macquulsan taas oo iswaafajin karta dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo bay'ada ee howlaha aadamiga isla markaana horumarin kara iyadoon la baabi'in meeraha ama xaalufinta khayraadka.
Dhammaan hay'adaha adduunka (dadka iyo shirkadaha, ururada, iwm.) Waa inay tixgeliyaan saddexdaas tiir marka la sameynayo qorshayaasha, barnaamijyada iyo mashaariicda, tan iyo haddii aan dooneyno inaan ku sii socono heerka nolosheena oo aan ku ilaalino jiilalka soo socda, waa inay ilaashadaan kheyraadkeena.
Fikradda ah in waddan uu kobcin karo dhaqaale ahaan aan xad lahayn oo aan waxba loo hureyn waa utopia. Ilaa iyo hada, bulshadeenu waxay ku saleyneysaa jiilkeeda tamarta gubida shidaalka shidaalka sida saliida, gaaska dabiiciga ama dhuxusha. Qaabkan u dhaqmida iyo kobcinta dhaqaale ahaan, wuxuu wasakheeyaa jawigayaga, biyaha iyo carrada sidoo kale wuxuu keenaa xaaluf iyo xumaan ku yimaada kheyraadka dabiiciga.
Iyada oo la horumarinayo tikniyoolajiyadda tamarta nadiifka ah iyo kuwa la cusboonaysiin karo, ku tiirsanaanta shidaalka la soo saaray ayaa hoos u dhacday. Si kastaba ha noqotee, weli kuma filna in gebi ahaanba dhaqaalaheenna laga quusto shidaalka. Sidaa darteed, wadada horay loogu socdo ee waddammada oo dhan waa tan kala-guurka tamarta ee ku saleysan dhaqaalaha tamarta xaddidan iyo cusboonaysiinta.
Arimaha deegaanka oo looga hadlay horumar waara
Muhiimadda ay leedahay abuuritaanka xaalado muddo-dheer ah oo suurta gal ka dhigaya wanaagga jiilalka hadda jira ee aan lagu sameynin qiime hanjabaad ama ka sii daridda xaaladaha nololeed ee mustaqbalka ee bina-aadamnimada waa shaki la'aan. Sidaa darteed, horumarka waara wuxuu tixgelinayaa arrimaha deegaanka ee muhiimadda muhiimka ah leh ee saameynaya saddexda tiir ee aasaasiga ah.
Axdiga Dunida Waa warbixin ku dhawaaqeysa anshaxa caalamiga ah ee adduun waara ay tahay inay lahaato soona bandhigto qeexitaan dhameystiran oo dhameystiran oo ku saabsan qiyamka iyo mabaadi'da la xiriirta joogtaynta. Tani waxaa la soo saaray muddo 10 sano ah, oo ka bilaabatay Shirkii Rio Janeiro ee 1992.
Sharci ahaanta Axdiga Dhulka wuxuu si sax ah uga yimaadaa geedi socodkii ka qaybqaadashada ee lagu abuuray, iyadoo kumanaan dad ah iyo ururo ka kala yimid daafaha dunida ay ka qaybgaleen sidii loo heli lahaa qiyamka iyo mabaadi'da la wadaago ee ka caawin kara bulshada inay noqdaan kuwo sii waara. Xitaa maanta, waxaa jira ururo iyo shaqsiyaad badan oo adeegsada warqaddan si loo baro arrimaha deegaanka loona saamayn ku yeesho siyaasadda maxalliga ah.
Dhinaca kale, Baaqa Caalamiga ee Kaladuwanaanta Dhaqanka (Unesco, 2001) waxay si qoto dheer u bahan tahay baahida aan u qabno in lagu barbaariyo xaga kala duwanaanta dhaqanka iyo sidoo kale deegaanka iyo kala duwanaanta noolaha. Si loo fahmo dhammaan howlaha noolaha, qofku waa inuu ogaadaa taariikhda aadanaha, tan iyo markii aan saameyn ku yeelanay horumarinta nidaamka deegaanka.
Sidaa darteed, waxaa la dhihi karaa kala duwanaanta dhaqanku wuxuu noqdaa mid ka mid ah xididdada horumarka ee la fahmay oo keliya xagga koboca dhaqaalaha, laakiin sidoo kale qaab lagu gaaro dheelitir aqooneed, shucuur, anshax iyo ruuxi ah oo qanciya. Si kale haddii loo dhigo, waxay noqonaysaa tiirka afraad ee horumarka waara.
Waxay kuxirantahay aaga ay howlaha wadan diirada saaraan, horumar waara ayaa lagu kala hormarin doonaa si uun ama midkale.
Joogtayntani waxay dhacdaa marka waxqabadyada goob lagu bartilmaameedsado joogtaynta deegaanka iyo bulshada. Waxay isku dayeysaa inay isku waafajiso dhibaatooyinka bulshada iyo deegaanka qaab faa'iido iyo dhaqaale ahaan macquul ah.
Markii aan ka hadlayno waaritaanka bulshada waxaan tixraaceynaa dayactirka wadajirka bulshada iyo xirfadaha shaqaalaha si loo gaaro ujeedooyinka horumarka guud. Si tan loo sameeyo, waa inay baabi'iyaan dhammaan saamaynta xun ee bulshada kuwaas oo sababa waxqabadyada kala duwan isla markaana kobciya kuwa wanaagsan. Waxay sidoo kale la xiriirtaa xaqiiqda ah in bulshooyinka maxalliga ahi helaan dheefaha horumarinta waxqabadka la qabtay si loo hagaajiyo xaaladdooda nololeed.
Waa mida iskudayeysa inay horumar dhaqaale ka dhigato mid la jaanqaadaysa ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha, bey'ada deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ah. Waxqabadyadeennu waxay abuuraan saameyn taban oo hoos u dhigta nidaamka deegaanka iyo baabi'inta deegaannada kumanaan nooc, keenaya saboolnimada noolaha. Sidaa darteed, joogtaynta deegaanku waxay isku dayeysaa in la helo dheelitir u dhexeeya horumarka dhaqaale ee waddan iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyo dhaqaale oo yareeya saameynta deegaanka iyo dib u soo celinta wixii horay loo nacay.
Horumar waara ayaa mararka qaar dabagala yoolal aan qaarkood gaarin. Tusaale ahaan, dhanka tamarta, waa runtaa in inta tamarta badan ee aad leedahay iyo tamarta nadiifka ah ee aad haysato, ay yaraanayaan waxyeelada ay wershadaha u geystaan ​​deegaanka. Si kastaba ha noqotee, si loo horumariyo warshado hufan iyo warshado, waa lagama maarmaan horumar farsamo oo aan raqiis ahayn, sidaa darteed ma ahan mid u furan dhammaan waddamada adduunka.
Wadamada ilaha dhaqaalahoodu kayaryahay, warshad heer-sare ah oo jawi ahaan ufiican oo kharashkeedu sareeyo ayaa ka waari karta warshada korantada caadiga ah, xitaa hadii ay ka waxtar badan tahay dhanka deegaanka. Sababtaas awgeed, waddamada ugu horumarsan iyagu kuma aycnaanin allabaryo taas oo ay tahay inay xaddido koboca dhaqaalaha ee ka dhashay ka faa'iideysiga deegaanka.
Si loo yareeyo dhammaan dhibaatooyinkaas sinnaanta iyo dhaqaalaha, goobta "Horumar waara adduun kala jaad ah" waxay ka shaqeysaa jihadaan iyadoo la isku dhafayo awoodaha dhinacyada badan iyo tarjumaada kala duwanaanta dhaqamada oo ah cunsur muhiim u ah istiraatiijiyad cusub oo horumar waara leh.
Macluumaadkan waxaad ku awoodi doontaa inaad ku ogaato wax walba oo la xiriira horumar waara markasta oo aad aragto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato horumarka waara